Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: June 2011
ကြော်ငြာတယ်တော့ မထင်ပါနဲ့ ဧးသိမ်းနဲ့ ပတ်သက်မှု့ မရှိပါဘူး :)
ရန်ကုန်က ပေါက်ဈေး တွေ သိချင်တာရှိရင် ချက်ချင်း မေးကြည့်နိုင်ဘို့ပါ။
ဂျီမေး၊ ဂျီတော့ ဆို myanmar.exchange@gmail.com ကို အက်ပါ။
Windows Live Messenger ဆို myanmar.exchange@live.com ကို အက်ပါ။
Yahoo! Messenger ဆို myanmar.exchange@yahoo.com ကို အက်ပါ။
AIM ဆို myanmarexchange@aim.com ကို အက်ပါ။
Facebook မှာဆို https://www.facebook.com/myanmarexchange ကို Friend လုပ်ပါ။
FEC ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက FEC
ဒေါ်လာ ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက USD
စင်ကာပူဒေါ်လာ ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက SGD
ငွေလဲနှုန်းတွေ အကုန် သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Exchange
ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာ ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက World Dollar
ရွှေ ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Gold
Export Earning ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Earning
သတ္တု တွေရဲ့ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Metal
ဆီ ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Fuel
ဆန် ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Rice
စပါး ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Paddy
ဆီ ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Oil Crop
ကုန်စည် ဒိုင်တွေက အဝင်ကုန် ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Commodity
ဈေးကွက် ပေါက် ဈေး သိချင်တယ်ဆို ရိုက်ရမှာက Market
အဲ....ခုနက ပြောတဲ့ ဈေးတွေကို မြန်မာလို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အနောက်က .mm ခံ ရိုက်ရပါမယ်တဲ့
(ဥပမာ FEC အစား FEC.mm ပေါ့) စမ်းကြည့်တာ မြန်မာလိုတော့ အကုန် မရသလိုပဲ...။
×××××××××Credit ကတော့ ×××××××××××
credit to: https://www.facebook.com/myanmarexchange
ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မျှဝေပါတယ်။
Posted by Ko Gyii at 4:23 PM No comments :
Links to this post Labels: http://www.facebook.com/myanmarexchange , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
FireFox4မှာ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခံရခြင်းက ကာကွယ်လို့ ရပြီဆိုပဲ
Do Not Track in Firefox 4
Credit To: http://blog.jdpfu.com/2011/03/31/enable-do-not-track-in-firefox-4
Posted by Ko Gyii at 12:06 AM No comments :
Links to this post Labels:4, Firefox , Mozilla , security , Track , ဆိုင်ဘာကမ္ဘာ , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Posted by Ko Gyii at 11:43 PM No comments :
Links to this post Labels: Measurement Converter Smart Tag , Microsoft , Microsoft Word , Office , Tip , Word , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Word Tips: Word 2003 မှာ Measurement Converter Smart Tag ရှိမနေရင် ..
Measurement Converter Smart Tag က Word 2007 က စပြီး default အနေနဲ့ ပါလာပါတယ်။ Word 2003 မှာတော့ Default အနေနဲ့ ပါမလာသေးပါဘူး။ (* Smart Tag တွေကို Word 2002 မှာစပြီး Microsoft က မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ) ဒါ့ကြောင့် Measurement Converter Smart Tag ကို သုံးချင်ရင် သတ်သတ် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတင်ပေးရပါမယ်။ သူ့ အင်စတော်လာက သေးသေးလေးပါ 1.2 mb ပဲ ရှိပါတယ်။ တကယ်က Word 2002 အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Word 2003 မှာလည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ကို Microsoft ၏ ဒေါင်းလုပ်ဆိုဒ် မှာ ဆွဲချယူပါ။
Measurement Converter Smart Tag အင်စတော်လာ အကြောင်း ဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
အင်စတောကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အပေါ်က ဒေါင်းလုပ်ကို ယူပြီးရင် MetST.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင် ရလာပါမယ်။ အဲ့ဒီ့ ဖိုင်ကို run လိုက်ရုံပါပဲ။ မ run ခင်မှာ Word 2003 ကို ပိတ်ထားဘို့တော့ လိုမယ်ပေါ့ဗျာ။ လိုအပ်တာ အဆင့်ဆင့်ကို အင်စတော်လာက ညွှန်တဲ့ အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားရုံပါပဲ။
အင်စတော်လာ တင်ပြီးနောက် Word 2003 ကို ပြန်ဖွင့်ရင် Security Warning တက်ကောင်း တက်နိုင်ပါတယ်။ (* ထုံးစံအတိုင်း ယုံကြည်မှ သုံးပါပေါ့ဗျာ။) အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ.။ (* နမူနာ ပြတာပါ။ ချွတ်စွတ် တူမှာ မဟုတ်ပါ။) Microsoft ကို ယုံကြည်ရင် Enable Macros ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ မယုံရင်တော့ Measurement Converter Smart Tag သုံးလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါ။
တင်လို့ အောင်မြင်ရင် AutoCorrect Options က Smart Tags စာရင်းပေါ်ကို Measurement Converter ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သုံးဘို့ရာ သူ့ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး အိုကေ ပေးလိုက်ရပါမယ်။ အောက်က ပုံကို ရှုပါ။
ဒါဆို Word 2003 မှာ Measurement Converter Smart Tag ရှိမနေရင် ရှာပြီး တင်ဘို့အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း ပြီးပါပြီ။
Word Tips: Word XP, Word 2003 မှာ Smart Tag ကို သုံးချင်ရင်
Measurement Converter Smart Tag MetST.exe ကို တင်တော့ တင်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် Smart Tags စာရင်းထဲ ဘယ်လိုမှ ရောက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- Macro Security မြင့်နေခြင်း (Tools Menu > Macro > Security မှာ Security Level ကို လျော့ပေးလိုက်ပါ။ Medium လောက်ဆို မဆိုးဘူး ထင်တာပဲ။)
- သင့် စက်က MetST.exe၏ Digital Certificate ကို Trust မဖြစ်ခြင်း။ (Tools Menu > Macro > Security က Trusted Publisher မှာ Trust all နဲ့ စတဲ့ အကွက် ၂ ခုလုံးကို အမှန်ခြစ် ပေးလိုက်ပါ။)
- Word 2003 ကို Restart လုပ်ကြည့်ပါ။
ဒီလို လုပ်တာတောင်မှ Smart Tags စာရင်းထဲ Measurement Converter Smart Tag ရောက်မလာသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းပါတယ်။ Word 2007 ပဲ ပြောင်းသုံးလိုက်ပါ ပြောရတော့မှာပဲ။ * Word 2003 ၏ ပြဿနာတွေကို Microsoft က မဖြေရှင်းပေးတော့တာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ၇က်နေ့ကတည်းကပါ။ ၂၀၁၄ ဧပြီလ ၈ရက်နေ့ဆို Extended Support လည်း ဖြတ်တော့မယ် ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလို ပြောရလဲ ဆိုရင် ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း Measurement Converter Smart Tag တင်မရတဲ့ Word 2003 + Xp Sp2 , Sp3 စက်တွေ တွေ့ဘူးပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ စမ်းလို့ မအောင်မြင်တော့လို့ပါ။
Posted by Ko Gyii at 10:48 PM No comments :
Word 2003 မှာ Smart Tag ကို သုံးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Smart Tag တွေ ပိတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ Smart Tag တွေ ပြန်ဖွင့် (Enable Smart Tag) ရမည့် နေရာ ကို ညွှန် ပြ ချင်ပါတယ်။
က) Word 2003 ၏ Tools Menu ရှိ Options ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
ခ) Options Dialog-Box ကျလာပါပြီ။ "View" tab-menu ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် "Show" အုပ်စုမှာ "Show Smart Tags" ကို အမှန်ခြစ် ပေးပါ။ အိုကေနဲ့ ထွက်ပေးပါ။
Tools > Options > View > Show > Show Smart Tags (checked) > OK
အောက်က ပုံကို ရှုပါ။ ဒီလို လုပ်ပြီးရင် သုံးတဲ့ Smart Tags တွေကို မြင်ရတော့ပါမယ်။ ဘာ Smart Tags သုံးချင်လဲ ဆိုတာ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ဆက်ရွေးပါမယ်။
ဂ) Word 2003 ၏ Tools Menu ရှိ AutoCorrect Options ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
AutoCorrect Dialog-Box ကျလာပါမယ်။ AutoCorrect Dialog-Box မှာ Smart Tags Tab-Menu ကို နှိပ်ပါ။ Smart Tags စာမျက်နှာကို ရောက်ပါမယ်။
"Label text with smart tags" ကို အမှန်ခြစ် ပေးထားရပါမယ်။ (ဒါက စာပေါ်မှာ smart tag ဖြစ်ကြောင်း သိအောင် ပြတဲ့ လိုင်းလေးတွေ ပြပေးမှာပါ။ အပေါ်ပုံက နံပတ်2လိုပေါ့။)
ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ smart tag တွေ ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ (ဥပမာ။ Measurement Converter ကို သုံးလိုလျှင် Measurement Converter ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။)
"Show smart tag action buttons" ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ (ဒါက smart Tag ပေါ်မှာ လုပ်လို့ရတဲ့ action တွေ ထုတ်ပေမည့် (i) ပုံလေးနဲ့ ContextMenu ကို ပြပေးမှာပါ။ အပေါ်ပုံက နံပတ် 1 လိုပေါ့။) ပြီးရင် အိုကေ ပေးပြီး ထွက်လိုက်ပါ။
ဒါဆို Word 2003 မှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Smart Tag ကို ရွေးချယ်နည်း ပြီးပါပြီ။
Posted by Ko Gyii at 9:58 PM No comments :
Links to this post Labels: Microsoft , Microsoft Word , Office , Smart Tag , Tip , Word , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Word 2007 မှာ Smart Tag ကို သုံးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Smart Tag တွေ ပိတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ Smart Tag တွေ ပြန်ဖွင့် (Enable Smart Tag) ရမည့် နေရာ ကို ညွှန် ပြ ချင်ပါတယ်။
က) Word 2007 ၏ Office Orb Button (ဘယ်ဘက် အပေါ်ဆုံးထောင့်က ဘုလုံး ခလုတ်) ကို နှိပ်ပါ။ File Menu ကျလာပါမယ်။ Word Options ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
Word 2007 > Office Orb Button > Word Options
အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
ခ) Word Options Dialog-Box ကျလာပါပြီ။ ဘယ်ဘက်က စာရင်းမှာ "Advanced" ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ညာဘက်က "Show document content" အုပ်စုမှာ "Show Smart Tags" ကို အမှန်ခြစ် ပေးပါ။ အိုကေနဲ့ ထွက်ပေးပါ။
Word Options > Advanced > Show document content > Show Smart Tags (checked) > OK
ဂ) Word Options ကို ပြန်ဖွင့်ပါ။ ဘယ်ဘက်မှာ Proofing ကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် ညာဘက်မှာ AutoCorrect Options ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆို Word 2007 မှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Smart Tag ကို ရွေးချယ်နည်း ပြီးပါပြီ။
Posted by Ko Gyii at 12:05 AM No comments :
Posted by Ko Gyii at 9:06 PM No comments :
Links to this post Labels: Command Reference , Microsoft , Microsoft Word , Office , Tip , Word , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Posted by Ko Gyii at 6:47 PM No comments :
Links to this post Labels: Formula Field , Microsoft , Microsoft Word , Office , Tip , Word , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Posted by Ko Gyii at 11:35 PM 1 comment :